Xukuumadda Abiy Ahmed oo jawaab ka bixisay go'aankii lama filaanka ahaa ee TPLF - Caasimada Online
Home Dunida Xukuumadda Abiy Ahmed oo jawaab ka bixisay go’aankii lama filaanka ahaa ee...
Xukuumadda Abiy Ahmed oo jawaab ka bixisay go’aankii lama filaanka ahaa ee TPLF
Addis Ababa (Caasimada Online) – Xukuumaddda ra’iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa ku gacan sayrtay go’aanka ay ku dhowaaqeen mucaaradka Tigray-ga ee ay kaga baxeen gobollada deriska la ah ee Afar iyo Amhara.
“Waxaan hadda dhameystirnay ka bixitaanka ciidamadeena ee gobollada Amhara iyo Afar,” waxaa sidaas twitter-ka ku qoray afhayeenka TPLF Getachew Reda.
Hase yeeshee afhayeenka Abiy Ahmed Billene Seyoum ayaa ku gacan sayrtay ku dhowaaqista mucaaradka oo ay ku qeexday mid lagu qarinayo guul-darrooyin militari.
“TPLF waxaa ku dhacay khasaraooyin weyn toddobaadyadii dhowaa, sidaas darteedna waxay sheegayaan ‘dib u garasho xeeladeed’ si ay u qariyaan guul-darrooyinkooda,” ayey u sheegtay AFP.
“Weli waxaa jira qeybo ka mid ah gobolka Amhara oo ay joogaan iyo sidoo kale furimo kale oo ay isku dayayaan inay dagaal ka furaan.”
Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa ka fal-celisay go’aanka Tigray-ga, wuxuuna afhayeenka Waaxda Arrimaha Dibedda Ned Price uu sheegay in haddii la xaqiijiyo dib u gurashada TPLF “ay tahay arrin ay soo dhoweynayaan.”
“Waa arrin aan ku baaqeyno, waxaana rajeyneynaa inay albaabka u furi doonto diblomaasiyad ballaaran.”
Warqadda uu diray QM ayuu hoggaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael ku baaqay in hawada gobolka Tigray laga dhigo aag duulimaadyada ka caagan, cunaqabateyn hub oo lagu soo rogo Ethiopia iyo xulufadeeda Eritrea iyo in la dejiyo hab ay QM ku xaqiijin karto in dhammaan ciidamada banaanka ka yimid ay ka baxaan Tigray.